नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ । तीमध्ये कतिपयले सोध्ने साझा प्रश्न हो– ‘के म फेरि संक्रमित हुनेछु ?’ वास्तवमा यो प्रश्न संक्रमणमुक्त भइसकेकाको मात्र होइन, अरूको पनि चासोको विषय बनिरहेको छ ।
होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूमा आफ्नो परिवारभित्रै संक्रमण पुष्टि हुने र आइसोलेसनमुक्त हुने समय फरक पर्दा कुन अवस्थादेखि सँगै बस्न सकिने र छुट्टिरहनुपर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । अर्थात् आइसोलेसनबाट मुक्त हुने व्यक्ति आइसोलेसनमै बसिरहेको परिवारको अर्को सदस्यबाट पुनः संक्रमित भइने हो कि भन्ने त्रासमा हुन्छ ।
के कोरानाको पुनः संक्रमण सम्भव छ ?
यो प्रश्न अझै प्रश्नै बनेर वैज्ञानिकहरूसामु खडा भइरहेको छ । हुन्छ भने कति समयपछि ? यो प्रश्नलाई सर्वसाधारणको चासो मात्र होइन, खोपको प्रभावकारितासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । पुनः संक्रमण हुँदा अघिल्लो संक्रमणभन्दा रोगको लक्षण कडा देखिन्छ कि कम भन्ने जानकारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिलोपटक हङकङमा ३३ वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुनः संक्रमणको वैज्ञानिक पुष्टि भएसँगै विश्व नै तरंगित भएको थियो । पहिलो संक्रमणको झन्डै चार महिनापछि युरोप भ्रमणबाट फर्कंदा उनमा फेरि कोरोना पुष्टि भएको थियो । क्लिनिकल इन्फेकसिओउस डिजिज जर्नलका अनुसार ती व्यक्तिलाई पहिलो संक्रमणताका तीन दिन लक्षण देखिएको थियो । उनी झन्डै दुई साता अस्पताल बसेकामा दुईपटक कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि डिस्चार्ज भएका थिए ।
दोस्रोपटकको संक्रमणमा भने उनमा लक्षण थिएन । पीसीआरमा भाइरल लोड (सीटी भ्यालु) २६ देखिएको थियो । जिनको अध्ययनले उनमा संक्रमण भएको पहिलो र दोस्रो कोरोना भाइरस फरक पाइएको थियो ।
पहिलोपटक उत्तर अमेरिका (अमेरिका)मा देखिएको पुनः संक्रमणको केस भने हङकङमा देखिएको भन्दा क्लिनिकल्ली भिन्न थियो । यहाँ पहिलोभन्दा दोस्रो संक्रमण कडा थियो । ‘द ल्यान्सेट इन्फेकसिओउस डिजिज’ जर्नलमा प्रकाशित यो पुनः संत्रमणको केस झन्डै डेढ महिनाको फरकमा देखिएको थियो । यो केसमा कडा खालको खोकी, श्वासप्रश्वासमा अवरोध देखिनुका साथै निमोनिया भएको र उपचारका लागि अक्सिजनको सहायता लिनुपरेको थियो । पीसीआरमा भाइरल लोड (सीटी भ्यालु) ३५ थियो । पहिलोचोटिको संक्रमणमा पनि सीटी भ्यालु लगभग यस्तै थियो । यी संक्रमितमा पनि पहिलो र दोस्रोपटकको भाइरसको जिनमा फरक पाइएको थियो ।
त्यस्तै दक्षिण अमेरिका (इक्विेडर) मा पहिलोपटक ४६ वर्षीय पुरुषमा पहिलो संक्रमणको एक महिनापछि पुनः संक्रमण देखिएको थियो । यहाँ पनि दोस्रो संक्रमण कडा र भाइरसको जिन फरक थियो ।
युरोप (बेल्जियम) मा पहिलो संक्रमणको तीन महिनापछि दोस्रो संक्रमणको केस फेला परेको थियो । दोस्रोपटकको भाइरसको जिन फरक थियो । ती संक्रमित यो अन्तरालमा विदेश वा कुनै अर्को ठाउँ गएका थिएनन् । यसले त्यो एक ठाउँमै एकभन्दा बढी फरक जिनका भाइरस फैलिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । युरोपका अन्य मुलुकमा पनि पुनः संक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
छिमेकी देश भारतमै कोरोना पुनः संक्रमणका केस बढ्दै गएको सञ्चारमाध्यमले जनाउँदै आएका छन् । समग्रमा हेर्दा दोस्रो केसहरू पहिलोभन्दा सामान्य नै देखिए पनि भारतमा पुष्टि भएका पुनः संक्रमण अझ कडा पाइएका छन् । संक्रमितलाई लामो समय उपचार गर्नुपरेको छ । यद्यपि भारतमा पुनः संक्रमण भएकाहरूमा पहिलो र दोस्रोपटकको भाइरसको जिनमा भिन्नता थियो कि थिएन, सार्वजनिक भएको छैन । दोहोर्‍याएर संक्रमण भएकाहरूबारे राम्रो अध्ययन र विश्लेषण हुन सके मात्र दोस्रो संक्रमणको लक्षण कडा हुने र नहुने विषयको यथार्थनजिक पुग्न सकिनेछ ।
कारण यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि पहिलो संक्रमण सामान्य भएकाहरूमा दोस्रो संक्रमणको सम्भावना पहिलो संक्रमण कडा भएकाहरूमा भन्दा बढी हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन् ।
माथिका केस रिपोर्टहरू हेर्दा दुई भिन्न जिन बोकेका कोरोना भाइरस जुन ठाउँमा घुमिरहेका हुन्छन् त्यहाँ एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी पटक संक्रमित हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा कति प्रकारका जिन बोकेका कोरोना भाइरस छन् भन्ने अनुसन्धान भएको वा कुनै तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । नेपालमा कोरोना भाइरस देखिएको ९ महिना भइसक्दा कोरोनाको जिनमा परिवर्तन आइरहेको हुन सक्छ । त्यस्तो रहेछ भने कोरोनाको पुनः संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि नकार्न सकिँदैन । तसर्थ अब संक्रमण मुक्त भइसकेकाहरूले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पूरै बेवास्ता गर्नु हुँदैन । खोप उपलब्ध नभएसम्म वा महामारी निर्मूल नभएसम्म यी मापदण्ड निरन्तर पालना गरिरहनुपर्छ ।
हामीकहाँ पुनः संक्रमणको घटना पुष्टि भइनसकेको वा बहस हुनै बाँकी रहेको अवस्था भए पनि विभिन्न वैज्ञानिक लेख वा सञ्चारमध्यममा सार्वजनिक केसका आधारमा पुनः संक्रमण हुँदै हुँदैन वा पछि बढ्ने छैन भन्न सकिँदैन । संक्रमणबाट मुक्त भएको समय जति बढ्दै जान्छ, पुनः संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै जानेछ । अहिले उपलब्ध तथ्यांकले औसतमा झन्डै साढे दुई महिनामा पुनः संक्रमण हुने देखाएको छ । यसको अर्थ संक्रमणपछि हामीमा विकसित एन्टीबडी कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न महिनौंसम्म सक्रिय रहँदैन भन्ने हो ।
नेपालमा कोरोना पुनः संक्रमणको सम्भावना, अवस्था, कारण र लक्षण कस्तो छ र हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ । यसबाट प्राप्त नतिजा कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिता बुझ्न र भावी रणनीति बनाउन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
(डा. पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुन्)